Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Argentina Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi "Buendia". Indaba yethu ye-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo kanye nokuvuka kuka-Emi Buendia. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram neLanuevacronica.
Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, isizinda somndeni, impilo yakhe, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngekhono lakhe lokudala amathuba noma ukwenza ukudlula kowesithathu. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Biography ka-Emi Buendia's ezithakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Emiliano Buendía Stati wazalwa ngosuku lwe-25th ngoDisemba 1996 edolobheni laseMar del Plata engxenyeni eseningizimu-mpumalanga yeBuenos Aires, e-Argentina. Wazalelwa kunina, uKarina kuyise, u-Eduardo.
U-Emi Buendia abazali bakaKarina no-Eduardo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ngibonga ngokuzalwa e-Argentina - izwe elidume ngokukhiqiza ababhali bebhola bekhwalithi efana Maradona futhi Messi - I-Buendía ikhomba njenge-Argentina yobuzwe obumhlophe obunezimpande zaseNingizimu Melika. Ukhulele ekhaya lakubo eMar del Plata lapho akhulela khona kanye nabafowabo abancane abancane - u-Augustin noJoaquin.
Izithombe Zobuntwana zika-Emi Buendia (kwesobunxele) zikhula ekhaya lakubo nomfowethu omncane u-Augustin. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukukhula eMar del Plata, uBuendia wayengumfana omncane kakhulu owayemkhulu kakhulu ngaphandle kwezingane ezinye ngaphandle kwabafowabo. Ngaphandle kwalokho, ubecabanga kakhulu ngebhola kunanoma yini enye futhi enezici ezinjengejubane namandla okubuka ikusasa lakhe kwezemidlalo.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi uBuendía eseneminyaka eyi-5, waqala ukudlalela iklabhu yasendaweni uCadetes de San Martín, umsebenzi ahlangana nawo nokufunda ePeralta Ramos Institute edolobheni lakubo iMar del Plata.
U-Emi Buendia waqala umsebenzi wakhe wokwakha iklabhu yobuntwana iCadetes de San Martín. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram kanye ne-comcomenorwich.
Ngenkathi eseCadetes de San Martín, uBuendia wachitha iminyaka eyisithupha yobuntwana bakhe esemncane edlala imidlalo emincane esendlini. Amandla webhola lezinyawo akhombisa amakhono obuchwepheshe nobuhlakani bamaqhinga ngaphezu kweminyaka yakhe nosayizi anciphise kwamenza wafuna ukuba ngumpetha we-Argentina International - uJuan Esnáider owancoma ukuthi aqhubeke nokwakha umsebenzi kwezemidlalo e-Real Madrid Academy.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Yize uBuendia wayeneminyaka engu-11 lapho efika kuReal Madrid, wayesemasentimitha ambalwa eduze notshani bokubethela okwenziwe ngefudu lapho aphikelela khona kanzima ukuze afakaze.
U-Emi Buendia wafika e-Real Madrid Academy njengengane encane eneminyaka engu-11 e2008. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukuthuthuka kukaBunendia sekwephuzile kanye nokuhluleka kwakhe ukuhambisana nejubane elifana nelinye lomdlalo ekugcineni kwamenza washiya ikilabhu ngemuva kweminyaka emibili. Ngenhlanhla, wafikelwa nguGetafe owamsayina ezinsukwini ngemuva kokushiya iReal Madrid.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Le nsizwa ayichithanga sikhathi ukuze ixazululwe eRetafe lapho ikhuphuke khona ngamazinga aphakeme nobungcweti ngaphambi kokutholela indawo eqenjini lababekeli leqembu lapho yayineminyaka engu-17. Umsebenzi wakhe wabonakala ulondoloze i-trajectory ebheke phezulu kuze kube isizini ye-2015 / 16 ibona uGetafe ehlaselwa uLaLiga.
Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba ukubuyiselwa kukaGetafe avele nokulimala okwashiya uBuendia emile kancane. Ngesikhathi uGetafe egcina ukukwenza lokho, uBuendia wayengabonakala kalula ukwakha umsebenzi emabhentshini ngenxa yokulimala kwe-ankle.
Ukunyuka kuka-Emi Buendia eGetafe konakaliswe ukukhubazeka nokulimala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
UBunendia oseluleme ngokugcwele wagcina ebolekwe ekilabhini yesibili yamaCultural Leonesa ngoJulayi 2017 ukuze azihlenge. Ukuqhubekela phambili kwathatha indlela ebingalindelekile ukuba ibe yisikhuthazo empumelelweni kaBuendia njengoba aphumelela kahle ekuhlaseleni amabanga aphakathi nendawo. Ekupheleni kwesizini, uBuendia wayenezizathu zokumamatheka futhi njengoba enikeza umdlali kaLeonesa umklomelo wesizini!
U-Emi Buendia wayengumdlali weCultural Leonesa wesizini ye-2017-2018. Isikweletu Sezithombe: Lanuevacronica.
Kungekudala uNorwich weza wabizela uBuendia obukeka efanelekile ezinhlelweni zabo zokubuyela kwi-Premier Premier League. Ngemuva kokusayina isivumelwano seminyaka emine nohlangothi olwaluyisivumelwano ngaleso sikhathi, uBuendia wadlala waze walindelwa njengoba eshaye inani lamagoli e-8 ku-English Soccer League (EFL) ukusiza uNorwich ukukhushulelwa kuPremier League. Ukushesha phambili kuze kube manje uBuendia uzisungulele njengomdlali wasesiswini we-Premier League eNorwich lapho kulindeleke ukuthi aqhubeke nokudlala ibhola elisezingeni eliphezulu kuze kube se2024.
U-Emi Buendia usayine inkontileka entsha neNorwich City ngoJulayi 2019. Isikweletu Sezithombe: Canaries.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Kunzima impela ukuthola isimo esithile sempilo kaBuendia ngesikhathi sobhala. Noma kunjalo, uku ndawo ndawo phakathi kokuthandana nokushada. Owesifazane osesithombeni ngempilo yothando kaBuendia ukhomba ngegama uClaudia.
U-Emi Buendia nentombi yakhe noma i-wag Claudia. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Noma kungaqiniseki ukuthi uBuendia wayenomlando wokuthandana yini nabanye besifazane ngaphambi kokuhlangana noClaudia, sazi kahle ukuthi izithandani zothando bezihlangene ngaphambi kwe2018 futhi zinendodana eyodwa ebizwa ngokuthi nguTiago.
U-Emi Buendia nomkakhe nendodana yakhe uTiago. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
U-Emi Buendia uvela kwimvelaphi yomndeni ojabulayo naphakathi nendawo. Bheka imininingwane ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana Nobaba ka-Emi Buendia: U-Eduardo ungubaba kaBuendia. Njengabo bonke abasekeli bebhola lezinyawo, wabona impilo kaBuendía ngesikhathi sakhe umsebenzi eMadrid nezinsizakusebenza zentsha yeGetafe ngokuhambela njalo ubuhlakani bebhola ngisho nalapho izibalo zikhuluma ngokungafunwa ngumdlali webhola lezinyawo. Isibopho phakathi kukababa wabathathu noBuendia siyaqhubeka nokuqina njengoba umdlali wasesiswini ohlasela engapheli amandla okwenza umndeni wakhe uziqhenye ukuthi usezingeni lomdlalo noma awuvaliwe.
Mayelana Nomama ka-Emi Buendia: Umama kaCarina Is Buendia futhi ngokuphikisana nowesifazane ngemuva kwenhliziyo kaBuendía. Ngaphezu kwakho konke, ungumnakekeli wezindaba eziphathelene nokuzidela okwenziwe ngumndeni ukuze kuqinisekiswe ukuthi amaphupho kaBuendia okudlala ibhola lasezingeni eliphezulu ayaphumelela. Uhlanganyela emndenini udumo olusha ngokuvela ezithombeni ezithwebula uBuendia echitha isikhathi esiningi nomndeni futhi azithathele yena lapho bezophuma.
Mayelana Nezingane Zika-Emi Buendia: UBuendia unezingane ezimbili ezihlonzwe njengo-Augustin noJoaquin. Ama-duo awahlali ngaphansi kwemithunzi kaBuendia kepha ahamba kahle ezindleleni zawo nasekusebenzeni kwawo. Bahlala no-Buendia noma nini lapho eseholidini futhi bamsize ukukhipha izinkumbulo ezimnandi zezinsuku zakudala ababenazo njengezingane.
U-Emi Buendia nabazali kanye nabafowabo ababili.Image Card: I-Instagram.
Mayelana Nezihlobo zika-Emi Buendia: Mayelana nesihlahla esikhulu somndeni sikaBuendia, umkhulu wakhe noyise kamama bakhe kungenye yezimfihlakalo zebhola ezingaxazululwa ngenkathi kungekho marekhodi akhona omalume bakhe, umalume, umshana nomshana wakhe. Ngokufanayo, abazala bakaBuendía abasazokhonjwa ezenzakalweni eziphakeme zempilo yakhe futhi bavuke kuze kube manje.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
I-Buendía inobuntu obuhle kakhulu bokuhamba nokuhamba okumenza abe nomuntu oyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, ukhombisa izici ze-Aquarius zodiac zokuba Ukuhlaziya nokugxila kwizenzo.
Ukude nokudlala imidlalo yokuncintisana nokuya ekuqeqesheni, uBuendía unentshisekelo nezindlela zokuzilibazisa ezibandakanya ukubuka ama-movie, ukulalela umculo, ukubhukuda nokudlala ithenisi.
U-Emi Buendia udlala i-Paddle Tennis njengomsebenzi wokuzijabulisa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Khuluma ngendlela uBuendia ayisebenzisa futhi asebenzisa ngayo imali yakhe, isamba semali yakhe esezingeni elifanele ithatha imvelaphi yakhe kumholo aluthola ngokudlala ibhola lezindiza eliphezulu ngenkathi ezinye izingxenye zomcebo wakhe ziimali eziholwe kwimikhiqizo evumela ukwenziwa njengoNike.
Yize kucutshungulwa izindlela ezisetshenzisiwe zokusebenzisa imali kukaBuendia ekutholeni impahla enjengezimoto nezindlu kusabuyekezwa, ushaya abalandeli njengomuntu ophila impilo yobukhazikhazi ngokuchitha isikhathi esezingeni ezindaweni ezinhle zokuphumula emhlabeni jikelele.
U-Emi Buendia ujabulele iholide lakhe ebhishi eMiami. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ngaphambi kokuthi siyibethe ngengubo yobuntwana buka-Emi Buendía kanye ne-biography sicela uthole ngezansi amaqiniso angaziwa noma angafinyeleleki angakusiza ukuba umazi kangcono.
ISAHLUKO: Umgcini webhola akakaze acashunwe enza izitatimende ezingadlulisela isihloko sokholo, futhi akakaze abonwe ebonga umuntu ophakeme ngenkathi edlala ibhola. Kodwa-ke, izingqinamba lezi zimvumela ukuthi abe ngumKristu.
IKOMIDI LELIZWE: UBuendia waqala umsebenzi wakhe webhola lomhlaba wonke ngokumela iSpain esemncane ngaphambi kokushintsha ukuthembela ukuthi azodlalela iqembu lesizwe lase-Argentina.
U-Emi Buendia odlalela iqembu lase-Argentina U20 e2015. Isikweletu Sezithombe: I-AlongComeNorwich.
I-TATTOO: Akanayo neyodwa i-tattoo emzimbeni wakhe futhi ushaya abaningi njengomuntu ongagcina isikhumba esingenabala ingxenye enhle yomsebenzi wakhe.
Ukubhema nokuphuza: IKungaba lula kakhulu ukuthi uBuendía ayeke ukuhlinzeka ngosizo olusemqoka kunokubona ukubhema noma ukuphuza.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Emi Buendia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Norwich City Soccer Diary
I-Lautaro Martinez Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-Marcos Rojo Ingane Yomlando Plus I-Untold Biography Facts
U-Erik Lamela Ingane Yendaba Yomntwana Plus Untold Biography Facts
UNicolas Otamendi Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Javier Pastore Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
i-facundo salas NgoJanuwari 25, 2020 E-3: 56 pm
Ungumuntu omkhulu ovela emndenini othobekile futhi onothando. Wayengumdlali omuhle webhola lombhoxo. wonke umndeni wakhe uvela kumbho wombhoxo.
I-Carlos Tevez Ubuntwana Bombhalo Plus I-Untold Biography Facts